बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हैन लिंग काटेर संग्रहालयमा सजाउनु पर्छ ! – eSajha News
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हैन लिंग काटेर संग्रहालयमा सजाउनु पर्छ !
प्रकाशित मिति: १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:३५
हाम्रो समाजमा बलात्कार अत्यन्त सामान्य बनिरहेको छ । बावुले छोरीलाई, दाजूले बहिनीलाई समेत बलात्कार गरेका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । बाहिर आउन नसकेका यस्ता धेरै घटनाहरु समाज घटेका हुन सक्दछन् । पछिल्लोपटक भएको सम्झना बिकमाथिको बलात्कार र हत्याको घटनाले फेरी एकपटक नेपाली समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ । नारीहरु नभएर पुरुषहरुको जीवन पनि नचल्ने, तर नारीहरु पुरुषका लागि केही होइनन् भन्ने मानसिक्ता हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । यही मानसिक्ताले गर्दा बलात्कारका घटना सामान्य बनिरहेका छन् । राज्य तहबाटै बलात्कारीहरुलाई बचाउने काम भइरहेको छ । बलात्कारका सम्बन्धमा मात्र होइन बलात्कारको आशयबाट हेरिने दृष्टिकोणलाई समेत यौनहिंसाको अभियोग लगाउन सकिने कानून देशमा बनेको छ । तर कानून प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि यौन हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनामा बृद्धि भइरहेको पाइन्छ ।
बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको जानकारी बाहिर आएको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको समाचारप्रति लेखकको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त निर्णय गरेको भनेर समाचार आएको छ । यो घटनाले बलात्कारका घटनामा सिंहदरवारभित्रका महिलाहरुलाई मात्र चिन्तित बनाएको छ, पुरुषहरुलाई कुनै प्रभाव परेको छैन भन्ने पनि सन्देश बुभ्mन सकिन्छ ।
यो समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने पनि समाचारमा चर्चा भएको पाइएको छ । पंत्तिकारलाई के लाग्दछ भने बलात्कारी पुरुषको लिङ्ग काटेर संग्रहालयमा सजाएर राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । काटिएर सजाइएको लिंङ्गको मूनि बलात्कारी पुरुषको नाम र उमेरसँगै लिङ्ग काटिएको मिति र घटनाको संक्षिप्त जानकारी समेत पाउने गरी लेखिनु पर्दछ । ताकि त्यो संग्रहालयमा भ्रमण गर्न र नेपालमा बलात्कारको इतिहासबारे वास्तविक्ता बुझ्न सकिने होस् ।
पछिल्लो समय किशोरी, दलित, गरिब र दूरदराजमा रहेका बालिकाहरूमाथि बलात्कारका घटनामा तीव्रता आएको छ । प्रहरीले जाहेरी नलिने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने, जनप्रतिनिधि मिलाउन संलग्न रहने गरेका समेत पाइएका छन् । बलात्कारीलाई राजनीतिक खोल ओढाएर राजनीतिक दलहरुले नै संरक्षण गरिरहेका घटनाहरु बाहिरिएका छन् । त्यसैले गर्दा कानूनबमोजिम दण्ड सजायको प्रावधान बलात्कारीहरुका लागि प्रभावकारी बन्ने अवस्था देखिदैन । घटनालाई दबाउने र दलका नेताहरुको संरक्षण प्राप्त हुने भएका कारण पनि बलात्कारका घटनाहरु सामान्य बनिरहेका छन् । प्रहरीले बलात्कारी व्यक्तिको अवस्था हेरेर मात्र जाहेरी (उजुरी) लिने गरेको पनि पाइएको छ । कुनै माथिल्लो तहको पदासिन व्यक्ति वा उस्को परिवारभित्रको सदस्य बलात्कारी रहेछ भने प्रहरीले उजुरी दर्ता नै गराउन नमानेका घटनाहरु पाइन्छन् । त्यसैले कानूनबमोजिम बलात्कारी ठहर भएपछि मात्र सजाय तोक्ने कामले बलात्कारीलाई कारवाही गर्न सकिदैन । बलात्कारीलाई घटना भएको ठाउँमै पहिचान गरेर उस्को लिंङ्ग काटेर संग्रहालयमा पु¥याउने अधिकार बलात्कृत नारी वा उनी सम्बद्ध परिवारका सदस्यहरुलाई कानूनले अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
हालका दिनहरुमा बलात्कारीलाई मृत्य दण्डको सजाय माग गर्दै विरोध प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् । यो विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थी संगठनको विशेष सहभागिता पाइएको छ । यसमा पनि धेरै पुरुष विद्यार्थीहरु नै रहेका छन् । न्यायिक विवेक भएकाहरुबाट बलात्कारजन्य घटना गरिदैन भन्ने कुरा यो जुलुश प्रकरणले पनि सन्देश गरेको छ ।
मेरो विचारमा मृत्युदण्डको सजाय बलात्कारको घटनामा प्रभावकारी हुन सक्दैन । आपूm स्वयम् पनि कानून व्यवसायी महिला भएका नाताले यो दावी गर्न सक्दछु । मृत्यु दण्डको अदालतबाट तोकिँदासम्म बलात्कारीले आपूm बच्ने तमाम् उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा मृत्यु दण्डको कानूनी प्रावधान प्रभावकारी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले पनि बलात्कारीलाई घटनास्थलमै कारवाही गर्न अधिकार पीडित पक्षले पाउनु पर्छ भन्ने पंक्तिकारको तर्क हो । बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको सजायको व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा भर्खरै कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यहाँबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ कि यो कानून प्रभावकारी भइरहेको छैन । मृत्यु दण्डको कानून कार्यान्वयन भइसकेपछि पनि भारतमा बलात्कारको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले मृत्यु दण्ड भन्दा प्रभावकारी दण्ड बलात्कारीको लिंङ्ग काटेर संग्रहालय सजाउनुमै हुनेछ ।
नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाउन रोक लगाएको छ । संविधानको भाग ३ को धारा ६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधारा २ मा कसैलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ, जसका कारण मृत्यु दण्डको सजाय दिने कानून बनाउन सकिदैंन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताका सन्धिहरुमा पनि हस्ताक्ष गरेको छ । त्यसैले पनि मृत्यु दण्डको सजाय नेपालको संविधानले गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर बलात्कारीको लिङ्ग काटेर संग्रहालयमा सजाउने कानून बनाउन संविधानले रोक लगाएको छैन । यो कानून नै नेपालको लागि सबै भन्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ०९:३५ मा प्रकाशित